Shina 28/400 Stainless steel Lotion Pump Soap pump orinasa sy mpamatsy | Hoyer
28/400 Pump mahamay
Ny habeny: 28/400, 24/400, 28/410, 24/410, ny halavan'ny fantsona manodidina ny 8 santimetatra, ny halavan'ny paompy raha tsy misy fantsona 4-3 / 8 santimetatra. Ny halavan'ny fantsona dia azo atao manokana raha manana tavoahangy hafa izay tsy mifanaraka amin'izany halavany izany ianao.
habe hafa misy: 24/410, 28/410, 24/400
Color: loko tany am-boalohany
MOQ: 5.000pcs, kely kokoa ny ekena raha toa ka manana tahiry isika
Fitaovana: Ny voatavo dia vita amin'ny vy vy 304 sy fantsona plastika tsy misy BPA ary ampahany anatiny ka azo antoka tsara amin'ny ranom-boaka, lotion, savony na zavatra hafa, azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra koa noho ny fanoherana ny korosi.
Fampiasana: kofehy 28/400 mahazatra, mety amin'ny tavoahangy tsirairay io habe io, na inona na inona plastika na plastika fitaratra. Ny endrika malaza indrindra dia mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny lakozia sy trano fandroana, na napetraka ao anaty fiara aza. Afaka miasa amin'ny ranon-javatra be dia be, toy ny lotion, shampoo, sanitizer tànana, conditioner ary savony lovia.
Mora teotina sy manimba, tena mety amin'ny famenoana ny ranon-javatra, ary koa tena mora ny manadio.
Fanamarihana: Azafady, avelao ny ankizy tsy latsaky ny 5 taona miala amin'ny zava-pisotro, mety handratra raha mivoaka amin'ny maso ny ranony.
Size 28/400Paompy halavola 4-3 / 8 santimetatra, halavany 8 santimetatra. 28/410, 24/400, 24/410 dia azo ekena ihany koa
Color volafotsy Ny loko vy matevina dia tsy manana volafotsy loko fotsiny
MOQ 5,000pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Fanodinana amin'ny paositra Logo voarindra, O design ny OEM dia misy koa.
Previous: Paompy plastika 28/410 kalitao ho an'ny fihenan-tsakafo na savony amin'ny rano
Manaraka: 28/410 Cap aluminium mendrika ho an'ny tavoahangy diffuseur Glass
Paompy lotion 28/400
stazy vy baomba staninless
Paompy plastika 28/410 kalitao famonosanana na ...
Namboarina noho ny kalitao vita amin'ny kalitao avo lenta ...
Mahavariana Sola voninkazo amboarina vita amin'ny voninkazo maina ...
3mm * 25cm Reed Stick ho an'ny tavoahangy diffuser
16oz 500ml Amber Glass Boston Bottle with Black ...
28/410 Cap aluminium mendrika ho an'ny Glass diffus ...